Adeegyada - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster Adeegyada - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster
Marxalad kasta oo nolosha ah waxaan isku dhafanaa jirka, maskaxda, iyo qalbiga annaga oo bixinna daryeelka aasaasiga ah, daryeelka ilkaha, caafimaadka dabeecadda, iyo adeegyada bulshada iyada oo loo marayo xiriir soo dhaweynaya, xoojiya, oo ka caawiya kor u qaadista bulshada. Maadaama aan nahay Guriga Caafimaadka ee Bukaanka-bukaanka ah, waxaan bixinnaa qaab loo dhan yahay oo lagu bixiyo adeegyada daryeelka caafimaad oo ka turjumaya dhaqamada, qiimayaasha, iyo baahiyaha shaqsiyaadka aan u adeegno. Horumarkeena kooxaha daryeelka si taxaddar leh u daryeela bukaannadooda una yimaadda bulshadeena leh khibrado u gaar ah iyo sooyaal dhaqamo kala duwan.
Si aad jadwal uga dhigatid maalin ama usbuuc isku mid ah qof ahaan ama ballanta telehealth-ka mid ka mid ah goobahayaga, fadlan soo wac 717-299-6371. Wixii ahmiyadaha caafimaad ee degdega ah saacadaha shaqada ka dib, wac 717-299-6371 si aad ula hadashid bixiyaha wicitaanka. Haddii ay jirto xaalad degdeg ah oo nafta halis gelisa, fadlan wac 911.
Fadlan nala soo socodsii haddii aad leedahay qandho, qufac, neef-qabad, neefsashada oo dhib ku ah, ama dhadhan la'aan ama urkaaga, iyo haddii lagaa helay COVID-19 bishii la soo dhaafay, ama aad xiriir dhow la leedahay ama ku nooshahay qof qaba COVID-19.
Haddii aad leedahay ballan qof-jir ah oo ballansan, fadlan adigu tag ballantaada.
Hoygaaga Caafimaadka ee Xarunta-Bukaanka-bukaanka (PCMH)
Waxaan bixinaa qaab loo wada dhan yahay siinta adeegyada daryeelka caafimaad oo ka turjumaya dhaqamada, qiimayaasha, iyo baahiyaha shaqsiyaadka aan u adeegno.
Daryeel loo dhan yahay
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay leedahay kooxo daryeel oo horumarsan oo si qoto dheer u daryeela bukaannadooda una yimaadda bulshadeena khibrad u gaar ah iyo sooyaal dhaqamo kala duwan.
Bukaanka-xudunta u ah
Marxalad kasta oo nolosha ah waxaan isku-dubarideynaa jirka, maskaxda, iyo wadnaha annagoo bixinayna daryeelka aasaasiga ah, daryeelka ilkaha, caafimaadka dabeecadda, iyo adeegyada bulshada iyadoo loo marayo xiriir soo dhaweynaya, xoojinaya, isla markaana ka caawinaya bulshadayadu inay kor u kacaan. Waxaan aaminsanahay caafimaadka oo dhan. Tani waxay ka dhigan tahay inaan wax ka qabanno oo aan bogsiino jirrada, laakiin si isku mid ah muhiim ah, waxaan ku helnaa sababaha keena annagoo ka shaqeyneyna meel ka baxsan daryeelka tooska ah iyo diiradda saarista cudurrada bulshada ee ay tahay in wax laga qabto si loo gaaro sinnaan dhab ah. Waxaan si is-hoosaysiin leh u fahmaynaa una qaadaneynaa nolosha adag iyo awoodaha gaarka ah, waxaanna si adag ugu shaqeyneynaa sidii aan u burburin lahayn dhammaan caqabadaha daryeelka. Waxaan u joognaa inaan hubinno in qof kastaa helo daryeelka uu u baahan yahay si uu u helo caafimaadkiisana u ahaado. Qoys kasta, saaxiib, iyo derisuba waxay si buuxda uga qaybqaataan firfircoonaanta bulshadayada xoogga badan ee murugsan.
Kooxda daryeelkaaga ayaa kaa taageeri doonta baahiyahaaga daryeelka caafimaadka iyagoo dib-u-fiirinaya taariikhdaada caafimaad ee dhammaystiran, oo ay ku jiraan diiwaanno kasta oo daryeel oo ka baxsan xarunteenna, si loo abuuro qorshaha daryeelka ugu fiican adiga.
Bukaannadu waxay wici karaan Xarunta Caafimaadka Lancaster inta lagu jiro saacadaha furitaanka iyagoo wacaya 717-299-6371. Saacado kadib, bukaanku waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay la xiriiraan bixiyaha wicitaanka ee ka caawin kara baahi kasta oo caafimaad oo degdeg ah. Bukaannadu waxay waliba farriin elektiroonig ah ugu diri karaan kooxdooda daryeelka markasta oo ay u maraan xariirka bukaanka.
Tayada iyo amniga
Daryeel caafimaad oo tayo leh waa xuquuq, mana aha mudnaan. Muhiimadeena ayaa ah in wax laga qabto, la cabbiro, lagana jawaabo dhammaan khibradaha bukaanka. Fadlan iimayl u dir tayada.compliance@lanchc.org haddii aad jeceshahay inaad na siiso hadiyadda ra'yi-celinta.